सात दिनपछि सकियो नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक, के-के भए निर्णय ? हेर्नुहोस् बिस्तृतमा — Sanchar Kendra
सात दिनपछि सकियो नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक, के-के भए निर्णय ? हेर्नुहोस् बिस्तृतमा
काठमाडौँ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएकाे छ । एक साता पहिलेदेखि कपिलबस्तुमा जारी बैठक बुधबार अपरान्ह सकिएको हो । सरकारद्वारा प्रतिबन्ध फुकुवापछि जेलमा रहेका नेताहरुलाई रिहा गरेपछि पार्टीले केन्द्रीय समिती बैठक बस्न खोजेको थियो । तर सरकारले बन्दीहरु रिहा गर्न ढिला गरेपछि केन्द्रीय समितिको १० औं पूर्ण बैठक गत बिहिबारदेखि कपिलबस्तुमा सुरु भएको थियो।
बैठकले पार्टीका महासचिव विप्लवले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावलाई पास गरेको नेकपा केन्द्रीय कार्यालयले सञ्चारकेन्द्रलाई जानकारी दिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार बैठकले विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपालमा वर्तमान संसदीय व्यवस्था ठिक वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमतद्वारा टुङ्ग्याउने बताउँदै विद्यमान समस्यालाई जनमतसङ्ग्रहले मात्रै समाधान दिन सक्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै अभियान सञ्चालान गरेर नेता-कार्यकर्ता र जनतासँगको सम्बन्ध जीवन्त बनाउन तथा पार्टीका योजना जनतामा पुर्याउनका लागि ४ महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘क्रान्तिकारी एकता र ध्रुवीकरणमा जोड दिऔँ, सुमधुर जनसम्बन्धसहित सृदृढ पार्टी निर्माण गरौंँ’ भन्ने मुख्य नारा तय गरेर उक्त अभियान सुरु गरिने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले सञ्चारकेन्द्रलाई जानकारी दिएको छ । त्यस क्रममा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले जनतालाई आफ्नो पार्टीको नीति र कार्यक्रम बुझाउनुका साथै जनसेवा र उत्पादनमूलक कार्यमा सहभागी गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यस्तै बैठकले कोरोना महामारीको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै पूर्वनिर्धारित सबै जनवर्गीय संघसंगठनहरुका भेला-सम्मेलन स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । देश कोरोना महामारीले आक्रान्त बनिरहेको समयमा कोरानोका विरुद्धको लडाइँ सबैको सरोकारको विषय भएकाले सबैलाई जागरुक बनाउनुका साथै कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा पार्टीका तर्फबाट देशैभरि कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नपर्ने भएका कारण हाललाई पुर्बनिर्धारित भेला सम्मेलनहरु स्थगित गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै बैठकले देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, महँगी, तस्करी, र कालोबजारीका बिरुद्ध ब्यापक संघर्ष गर्ने निर्णय गर्दै त्यसमा जुट्न देशभरका नेता कार्यकर्ता र पार्टीका समर्थक शुभचिन्तकलाई अनुरोध पनि गरेको छ । बैठकले पार्टीका केहि ब्यूरो सदस्यहरुलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकमा पार्टी महासचिव विप्लवले प्रस्तुत गरेको नयाँ राजनीतिक दस्ताबेजमा अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि सबै पक्षसँग संवाद गर्ने विषय उल्लेख छ । दस्तावेजमा अग्रगामी राजनीतिक निकास र राज्य रूपान्तरणको सवाललाई मुख्य विषय बनाउँदै वर्तमान अवस्थामा देशको नेतृत्व लिने गरी जनवादी केन्द्रीयताको उच्च अभ्याससहित छलफल गरिएको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै बैठकलाई समापन गर्दै पार्टीका महासचिव विप्लवले बैठक पार्टी जिबनको नयाँ परिस्थिति र जिम्मेवारीमा उभिएर सम्पन्न भएको बताएका थिए । विप्लवले भने – “हाम्रो अगाडि नेपालको राजनीतिक जीवनका बारेमा प्रश्नहरु उभिएका थिए ति प्रश्न र अहिलेको राजनितिक संकटको समाधान दिने स्पष्ट दिशा निर्देश यो बैठकले गरेको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशालाई जीवन्त बनाउने ठाउँमा हामी आएका छौ । यसले सबैलाइ रुपान्तरित गरेको छ । यसले नया बोधसहित उथलपुथल पार्ने छ । नेपाली राजनितीमा हस्तक्षेप गर्नेछ । पार्टी र नेतालाइ जनतामा जोड्ने छ । यो बैठकको उचाई नेपाली क्रान्तिलाइ नेतृत्व दिने तहमा पुगेको छ ।”
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकारसँग ३ बुँदे सहमतिपछि बन्दी रिहाइ र मुद्दा खारेजीको प्रक्रियामा गरिएको ढिलाइप्रति विशेष चासो, आशंका र प्रश्न गरेका थिए । जबाफमा महासचिव विप्लवले बन्दी बनाइएका सबै तहका नेता–कार्यकर्ताहरू सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार छिट्टै रिहा हुने विश्वास व्यक्त गर्दै पार्टीका तर्फबाट थप पहल गर्ने जानकारी गराएका थिए ।
बैठले सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिलाई समिक्षासहित अनुमाेदन गरेकाे छ । तीन बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र आफ्नो पार्टीले पूर्णरुपमा पालना गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणबाट अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार र राहतमा जुट्न देशभरीको पार्टी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतीयले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोमा हमला, ४२ गाडी तो’डफोड २७ भवनमा आ’गजनी
अब कसकाे नेतृत्वमा बन्दैछ नयाँ सरकार ? हेर्नुहोस यस्ता छन् ३ विकल्प
नेकपाले खारेज गर्यो ब्यूरो, विस्तार गरियो केन्द्रीय समिति, यस्तो छ कार्य विभाजन
पार्टी फुटको समाचार बाहिरिएपछि विप्लवको सचिवालयले मुख खोल्यो, हेर्नुहोस बिज्ञप्तिसहित
मजदुरहरूले श्रमसँगै विद्रोह गर्ने र नयाँ समाजको निर्माण गर्ने अग्रगामी भूमिका पूरा गर्नैपर्छ- विप्लव
विप्लवका दाजु तथा नेकपा नेता वीरजंग रिहा
कोरोना ह्वात्तै बढेपछि विप्लवले नेता-कार्यकर्तालाई दिए जनसेवामा जुट्न निर्देशन, विज्ञप्तिसहित